अष्ट्रेलियामा घर जोड्ने सुनिताको रहर ! (भिडियो सहित) - NewsPolar NewsPolar
अष्ट्रेलियामा घर जोड्ने सुनिताको रहर ! (भिडियो सहित)
२ मंसिर २०७१, मंगलवार ०८:४९
लोकप्रिय गायिका सुनिता दुलाल सांगीतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा थुप्रै देशहरु घुमिसकेकी छिन् । यसैक्रममा यही नोभेम्बर २२ देखि डिसेम्बर ५ तारिखसम्म उनी अष्ट्रेलियाको बिभिन्न शहरहरुमा हुन गईरहेको स्पन्दन साँझमा आफ्नो प्रस्तुति लिएर उपस्थित हुने छिन् । यो कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा सुनिताले अष्ट्रेलियामै घरबार जोड्ने रहर ब्यक्त गरेकी छिन् । उनैको नाममा युट्यूवमा अपलोड गरिएको भिडियोमा उनले यस्तै आसय ब्यक्त गरेकी छिन् । साथै उनले आफ्नो पनि प्रस्तुति रहने सो कार्यक्रममा सहभागी हुन संपूर्ण अष्ट्रेलियवासी नेपालीहरुलाई आग्रह गरेकी छिन् । नेपालको काठमाडौमा रहेका दुःखी, रोगी र असहायहरुको सयोगार्थ अष्ट्रेलियन नेपाल पब्लिक लिङ्कको आयोजनामा स्पन्दन साँझ कार्यक्रम गर्न लागिएको हो । नोभेम्बर २२ तारिख शनिबारका दिन पिटर्सम स्थित १०७ क्रिष्टल स्ट्रेटमा रहेको पिटर्सन टाउन हलमा कार्यक्रम हुने भएको छ । कार्यक्रममा सुनिताका अलवा नेपालमा लोकगीतको क्षेत्रमा सर्वाधिक चर्चामा रहेका पशुपति शर्माका र नायिका केकी अधिकारीको पनि बिशेष प्रस्तुती रहनेछ । कार्यक्रममा स्थानीय कलाकारहरुले पनि विभिन्न प्रस्तुती दिने भएका छन् । कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सहयोगार्थ ३० अष्ट्रेलियन डलर तय गरिएको आयोजकहरुले जनाएका छन् ।